Ma doonaysaa in aad ka rujin Galaxy Go S5660? Waxaad tahay meesha hadda. Maqaalkani waxa uu ku saabsan yahay in aad la wadaagto tallaabooyinka sida loo rujin Samsung Gio S5660. Iska akhriso content buuxda oo yeela si adag ay u soo socda.
Xasuusin gaar ah: Kan waa hage loogu talagalay oo kaliya Samsung Galaxy Gio S5660. Don 'isku day in ay isku dayaan la telefoonada kale, tan iyo markii ay soo saari karaan waxyeelo aad telefoonka.
Ka hor inta aadan wax kale samayn, akhriska iyo wax ka qaban hoos ku qoran marka hore:
1. afjarno ka tirtiri doonaa damaanad telefoonka, si aad u hubiso in aad hore u yaqaan.
2. Kaabta dhammaan macluumaadka ku saabsan telefoonka in ay ka fogaadaan khasaare xogta ( sida loo raad raac xogta phone Android ).
3. Hubi oo loo xaqiijiyo in batteriga ee aad telefoonka ka badan tahay 70%.
4. Waxaad tahay ee aad halis gaar ah oo soo afjarno aad Galaxy Gio S5660.
Tan iyo markii aad hore u aqbalay oo dhan oo iyaga ka mid, Hadda aynu ku hoos u hesho in ay shaqada rooting ah.
Download xirmo xididka aad Galaxy Gio GT-S5660 halkan.
Tallaabada 1. Ka qalab aad u darbay
Marka hore, hubi in aad karti debugging USB ah ee aad taleefan. Just Halkan ka fiiri: Goobta> Codsiyada> Horumarinta> hubi sanduuqa horteeda Debugging USB .
Markaas xiriiriyaan phone in kombiyuutarka via cable USB, oo nuqul xirmada in aad hore u soo bixi in buugga asalka u ah kaarka SD ku saabsan telefoonka.
Tallaabada 2. Helitaanka Mode Recovery ee aad taleefan
Telefoonka Dami iyo bilaabaan inay galaan Recovery Mode hadda. Press Volume Up + Home + Power waqti isku mid ah ee aad taleefan. Marka shaashadda buuxiyo, sii daayo badhannada mar. Markaas ayaad ku soo kabashada Mode.
Tallaabada 3. Baaxadda xirmo rooting aad si ay u rakibi
Ka dib marka aad hesho Recovery Mode, xulo qaab update Codso kaydinta dibadda in ay ku shuban xirmo rooting oo aad soo bixi ka hor. Hubi in aanad siibka baakada. Just u dooran oo riix badhanka Power si loo xaqiijiyo rakibo.
Tallaabada 4. Root habka hadda
Waxa aad qaadan doontaa dhowr daqiiqo u rakibo. Ka dib markii in, waxaad tagi kartaa dib u reboot nidaamka hadda. Waxa aad qaadan doonta muddo ilaa xad, laakiin marka reboots, telefoonka ayaa si guul leh loo rujin.
> Resource > Talooyin Root > Sida loo xididka Samsung Galaxy Gio S5660